( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း ) :: partner
Homepage > ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း )
"ဆရာတော်ဘုရား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာကိုခေါ်ပါသလဲဘုရား၊
ဘာသာခြားတစ်ဦးဦးက မေးလာလျှင် မည်သို့ ဖြေရမှာပါလဲဘုရား တိုတိုရှင်းရှင်းနဲ့ နားလည်အောင် ပြန်ပြောပြနိုင်အောင် ဖြေဆိုတော်မူပါဘုရား၊
ဆရာတော်ဘုရားကို ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘုရား၊
အချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ -
(၃) ဘဝရဲ့ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန် ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ရမယ် - လို့ အမိန့်ရှိပါတယ်။"
"အချို့က 'ဗုဒ္ဓဘာသာ' ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဆိုတာ ဘုရား၊ ဘာသာဆိုတာ အယူဝါဒ၊ ဘုရားရဲ့ အယူဝါဒလို့ ဖြေဆိုကြပါတယ်ဘုရား။"
"အချို့ကလည်း သာသနာဆိုတာ အဆုံးအမ၊ ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ၊ သာသနာကို ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်ကြောင်း ပြောကြပါတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို အသေးစိတ် သေသေချာချာ သိချင်နေပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်ဘုရား ဖြေကြားပေးပါဘုရား"
"အံမလေး၊ အမေးသာပြောရတယ်၊ အဖြေတွေကလည်း စုံလို့ပါလား၊ ဘုန်းကြီးက ဘယ်လိုဖြေရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး"
"ဆရာတော်က တပည့်တော်နားလည်အောင် ဖြေပါဘုရား၊ အဲဒီအဖြေတွေကို စိတ်တိုင်းမကျလို့ ဆရာတော်ဘုရားကို ထပ်မံမေးလျှောက်ခြင်းပါဘုရား"
"အင်း ... ဘုန်းကြီးဖြေမှ ပိုရှုပ်ကုန်ရင် ခက်မယ်။"
"ဆရာတော်ဘုရား ဖြေရင် ရှင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဖြေပေးပါဘုရား။"
"အင်း ... ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဘုန်းကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ခေါ်တာကို လုံးဝမကြိုက်ပါ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာလို့ ခေါ်မှ ကြိုက်ပါတယ်၊ (သို့) ဗုဒ္ဓဝါဒလို့ ခေါ်မှ ကြိုက်ပါတယ်"
"ဘုန်းကြီးတို့ ပိဋကတ်တော်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ တွဲခေါ်တဲ့စကားလုံး တစ်လုံးမှ မရှိပါ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာလို့ တွဲခေါ်တဲ့ စကားလုံးတွေတော့ အများကြီး ရှိတယ်။ 'ဗုဒ္ဓသာသန'ကို မြန်မာလိုပြန်ရင် 'ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ' လို့ ပြန်တာကောင်းပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ အဆုံးအမလို့ ပြန်ရင် အခြားဘုရားတွေနဲ့ ရောနှောသွားမှာ စိုးလို့ပါ၊ အဲဒီ ဗုဒ္ဓက ဘယ်လိုသာသန အဆုံးအမတွေ ပေးခဲ့လဲမေးရင် အချုပ်အားဖြင့် ပြောပြပါလား မေးရင် ဒီပါဠိဟာ အချုပ်ပါပဲ။
ဧတံ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ။ ... တဲ့"
"အဲဒီမှာ ဗုဒ္ဓါန သာသနံ-ဆိုတာ ဗုဒ္ဓသာသနာ-ဆိုတာပါပဲ၊ အဲဒီပါဠိကို မြန်မာမပြန်ဘဲ ရှစ်လုံးဘွဲ့နဲ့ ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါ။"
ဤသုံးပါး၊ ဘုရားသာသနာ။ ... တဲ့"
"ဘုရားသာသနာဆိုတာ ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို ခေါ်တယ်၊ ဗုဒ္ဓတိုင်းရဲ့ အဆုံးအမကို ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအဆုံးအမကို မြန်မာစကားပြေနဲ့ ပြောရရင် -
(၃) မိမိစိတ်ကို ဖြူစင်အောင်ထား။... တဲ့ "
"အဲဒီအဆုံးအမ သုံးမျိုးကို အကျယ်ချဲ့ရင် နိကာယ်ငါးရပ် ပိဋကတ်သုံးပုံ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီအဆုံးအမ တစ်နည်းပြောရရင် 'ဓမ္မဝိနယ'လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ ဓမ္မဝိနယနဲ့ သာသနသည် သဘောချင်းတူပါတယ်။ သာသနကို တရားကိုယ်အချုပ်ကောက်ရင်- မဂ်လေးတန်၊ ဖိုလ်လေးတန်၊ နိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ကို ကောက်ရသလို ဓမ္မဝိနယ-အရလည်း အဲဒီတရားတွေပဲ ကောက်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးက ဗုဒ္ဓသာသနာ၊ ဗုဒ္ဓဝါဒလို့ ခေါ်တာပဲ ကြိုက်ပါတယ်။"
"မှန်ပါဘုရား၊ ဆက်ရှင်းပါဦး ဘုရား"
သူတို့ နားလည်သလို သူတို့ ဘာသာများနဲ့ တန်းတူထားပြီး သူတို့အခေါ်အတိုင်း ခေါ်ဝေါ်ရာမှ 'ဗုဒ္ဓဘာသာ' ဆိုတဲ့ အခေါ် ဖြစ်လာတာပါ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဂျပ်ဆင်အဘိဓာန်မှ ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို နားယောင်ပြီး ခေါ်ရာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။"
"ဘာသာဆိုတာ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ဘာသာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာက ဒီလို မဟုတ်ပါ၊ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်တော်မူတဲ့ ဘုရားအများကို ယုံကြည်တဲ့ ဝါဒပါ။ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ Religion ဘာသာမဟုတ်ခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓဝါဒကို ဗုဒ္ဓဘာသာ-လို့ မခေါ်သင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာလို့သာ ခေါ်သင့်ပါတယ်။"
"အေး ... ဘာသာရေးဆိုတာ ထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်းရန် မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာ ဝါဒဟာ ထာဝရ ဘုရားသခင်နဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်းရန် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း ဟုတ်ရဲ့လား"
"အေး ... ဘာသာရေးဆိုတာ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု (သို့) ထာဝရ ဘုရားသခင်အား ဂုဏ်ပြုချီးကျုးမှုကို ခေါ်ပါတယ်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒသည် အဲဒီလို မဟုတ်ပါ၊ ပြီးတော့ ဘာသာရေးဆိုတာ ထာဝရဘုရား၊ အတ္တဝိညာဏ်၊ ကောင်းကင်ဘုံ ဆုတောင်းပတ္ထနာတို့နဲ့ များစွာဆက်စပ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှု တစ်ရပ်ကို ခေါ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒက ထာဝရဘုရား၊ အတ္တဝိညာဏ်၊ ကောင်းကင်ဘုံ ဆုတောင်းမှုကို လက်မခံလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ-လို့ မခေါ်သင့်ပါနော်"
"အေး ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်တာက ဗုဒ္ဓရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်တာပါ၊ ဘုရားရှင်ကို ကယ်တင်ရှင်အနေမျိုးနဲ့ ယုံကြည်တာ မဟုတ်ပါ၊ ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ ဗုဒ္ဓက ဆရာစား၊ ဗုဒ္ဓက လက်ဆုပ်၊ လက်ကိုင် လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ 'အာစရိယမုဋ္ဌိ' မရှိပါ၊ ဗုဒ္ဓကျင့်သလို ကျင့်က ဗုဒ္ဓဖြစ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ထားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာက ဆုတောင်းသက်သက် ဝါဒမဟုတ်ပါ၊ ဆုတောင်းဘာသာ မဟုတ်ပါ။ ဆုတောင်းသက်သက်ဆိုရင် ဘာသာရေးလို့ ခေါ်ရပါတယ်။ ဒါဖြင့် ဗုဒ္ဓဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဆုတောင်းမှု မရှိဘူးလား-ဆိုတော့ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ ဆုတောင်းမှုက ကိုယ်ပြုထားတဲ့ ကုသိုလ်ကံရဲ့ အကျိုးကို တောင်းယူတာပါ၊ ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ တောင်းတာမဟုတ်ပါ၊ ယခုအခါမှာ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ ဘာသာရေးဆန်နေပြီနော်၊ သတိထားပါ။"
"ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ပစ္စုပ္ပန် အကြောင်းအကျိုးတရားတွေကို ဦးစားပေးတဲ့ ဝါဒပါ။ ဗုဒ္ဓဟာ ကိုယ်တိုင်ဓမ္မကို ရှာဖွေပြီး ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဖြစ်မှ ဗုဒ္ဓအဖြစ် ရောက်ပုံ လမ်းစဉ် ကျင့်စဉ်တွေပဲ ဟောခဲ့ပါတယ်၊ ဆုတောင်းဖို့ မဟောခဲ့ပါ။ အဲဒီအဆုံးအမ လမ်းစဉ်တွေ မိမိတို့ ကိုယ်ကို မိမိတို့ အားကိုးပြီး အဆင့်ဆင့်သော ဝီရိယနဲ့ အားထုတ်ကျင့်ကြံဖို့သာ ဟောခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ မေ့လျော့ ပေါ့တန်နေလို့ မရပါ၊ သတိတရား လက်ကိုင်ထားပြီး ကြိုးစား အားထုတ်ယူမှ ကိုယ်လိုရာ ရနိုင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာက ကိုယ်အကျိုးကိုယ်စံ၊ ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်ခံပါ၊ ဗုဒ္ဓက အကျိုးကိုလည်း မပေးပါ၊ အပြစ်ကိုလည်း မပေးပါ၊ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓကို မကြောက်ရပါ။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဗုဒ္ဓကို နည်းပေးလမ်းညွှန်အဖြစ်နဲ့ အားထားယုံကြည်တဲ့ သဘောမျိုးပါ၊ မိမိကိုယ်ကို လုံးဝပုံအပ်ပြီး အားကိုးတဲ့ သဘောမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်"
"ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဗုဒ္ဓအတွက် ဘာမှလုပ်ပေးစရာ မလိုပါ၊ ဘာသာရေးမှာ ဘာသာဘုရားအတွက် လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဗုဒ္ဓက လမ်းညွှန်တဲ့ ကိစ္စပါ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တွေက လိုက်နာကျင့်ကြံရသူတွေပါ။ ဗုဒ္ဓဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ကျင့်တာသည်ပင်လျှင် ဗုဒ္ဓကို အမြတ်ဆုံး ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ပူဇော်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။"
"ဗုဒ္ဓဝါဒက အတ္တဟိတ = ကိုယ်ကျိုးကျင့်သက်သက်နဲ့ ပရဟိတ = သူတစ်ပါးအကျိုးသက်သက်ကျင့်တဲ့ဝါ
ဒနှစ်ခုရဲ့ အလယ်က သွားတဲ့ အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ဝါဒပါ၊ သာသနာပါ၊ ဘာသာမဟုတ်ပါ။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းပြီးလား။"
အားလုံးသန္တာန်၊ အမြင်မှန်၊ လျင်မြန်ရစေသော် ...
Myanmar - Golden Land Of Pagodas And Temples
Pagodas and Buddhist temples -asort of synonym of Myanmar, the Golden, "or" Land of Pagodas ". Britain conquered Burma for 62 years (1824 - 1886) and turned it into its Indian Empire. Burma wasaprovince of India until 1937 and then becameaseparate self-governing colony. Independence was won it in 1948. In general Ne Win dominated the government from 1962 to 1988, first asamilitary commander and then asaself-proclaimed president and political figure. Despite multiparty elections in 1990, in which the main opposition party - National League for Democracy - won, the ruling council refused to transfer power. League leader and Nobel Peace Prize, Aung San Suu Kyi is under house arrest from 1989 to 1995 and from 2000 to 2002, sat in jail in May 2003 and is now again under house arrest. In December 2004, the Board announced the extension of her arrest, at least for another year. Her supporters, as well as all those who are fighting for democracy and human rights are attacked or jailed.
Love Daily Video? Join our Group Funzug for Free!
This is the introduction to this award winning documentary. It is an over-view of the country...it's people
ဤပိုစ်ကို ဖတ်ပြီးမှ ဘုရားသွားဖူးကြည့်ပါ...
ဆိုသော လင်္ကာလေးကို သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မည်..
စေတီတော်မှ ညွှန်ပြသော သင်္ကေတများမှ ဟောပြောနေသော တရားတော်များကို ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်း နိုင်ပါက ပါရမီ ရင့်သန်ပြီးသူ ဖြစ်ပါက ဘုရားဖူးရင်းပင် နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ကြောင်း ပြောမည်ဆိုပါက. လွန် အံ့မထင်
စေတီဆိုတဲ့ဝေါဟာရက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် မပွင့်ထွန်းခင်ကတည်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဝေသာလီပြည်ကြီးရဲ့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမျိုးမျိုးသော အရာဌာနတွေကို စေတီသမုတ်ပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့တာကြောင့် စေတီတွေ များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ အချို့စေတီတွေကတော့ နတ်ဘီလူးကြီးများကို ရည်မှတ်ပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ နတ်ကွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့တော့ နတ်ကြီးတယ် ဆိုပြီး မခူးကြနဲ့ မဖျက်ဆီးကြနဲ့ စသည်ဖြင့် သီးခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့စေတီတွေဟာ တောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ တောတွေဖြစ်ပါတယ်။
စေတီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရိုအသေပြုအပ်သော အရာ၊ ဌာန အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလို ပြန်ရင် အရိုအသေပြုအပ်သော သင်္ကေတ ဆိုတာပဲ သင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဟိန္ဒူ ဘုရားစေတီများ ၊ ဒီနေ့ခေတ် Holy City တွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လာဆာ၊ မက္ကာ၊ ဂျေရုဆင် တို့လို မြို့တော်တွေဟာလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အရိုအသေပေးရာ ဌာနတွေ ဖြစ်လို့ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အတိုင်းပြောရရင် စေတီခေါ်ထိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားစေတီ များ နှင့် ဗိသုကာပညာရပ်
ဂေါတမဗုဒ္ဓသာသနာ၏ ပထမဦးဆုံးသော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ
ဂေါတမဗုဒ္ဓသာသနာ၏ ပထမဦးဆုံးသော ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါ
( မှတ်ချက်။ ဤစေတီတော်သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေတိဂုံဘုရားသမိုင်း စာအုပ်တွင် အသေးစိပ်ဖတ်ရှုနိုင်သည့်အတွက်.. ယခု မဖော်ပြတော့ပါ )
ဒါကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ ကို ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးနဲ့ သာ ကိုးကားဖော်ပြလိုပါတယ်...
ဗိသုကာပညာရပ်တစ်ခုအနေဖြင့် လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြန်မာတို့ ၏ သီးခြားဗိသုကာလက်ရာစင်စစ် ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို
၁. ရွှေတိဂုံဘုရားသည် အပေါ်မှ မိုးကြည့်လျှင် ပန်းတင်ခုံခေါ် အောက်ခြေအုတ်ခုံကို လေးထောင့်ကျကျ စတုရန်းပုံဆောက်လုပ်ထားပါတယ်.
( ဟိန္ဒူ ဘုရားစေတီများသည် အောက်ခြေအုတ်ခုံကို ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်ပိုင်း အဆောက်အဦကို ဖြစ်စေ အ၀ိုင်းပုံနှင့် အခုံးပုံကို အခြေခံပြီး ဆောက်လုပ်ထားကြောင်း တွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် . )
၂. ပန်းတင်ခုံပေါ်တွင်မှ ပစ္စယာ သုံးဆင့်ခေါ် လှေကားထစ်သဖွယ် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ဆဌဂံ မှ အဆင့်ဆင့် အဌဂံပုံသို့ ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ထားပါတယ်..ရည်ရွယ်ချက်မှာ စတုရန်းမှ စက်ဝိုင်းပုံသို့ ပြောင်းလဲ သွားဟန်ကို မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်ဖွယ် ပညာသားပါပါ ပြေပြေလေး ပြောင်းလဲယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
၃. ပစ္စယာ သုံးဆင့် ပေါ်တွင် အမျှဝေခြင်း အထိမ်းအမှတ် ခေါင်းလောင်း မှောက်ကို တည်ထားရာ ခေါင်းလောင်းခြေမှာ အခွက်ပုံဖြစ်ပြီး ခေါင်းလောင်း စည်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာ အခုံးပုံဖြစ်ခြင်း၊ အခုံးနဲ့ အခွက်ကို ကြည့်သူရဲ့ အမြင်တွင် သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆက်ထားပုံကို ပညာရှင်များအနေနဲ့အတုယူကြရပါတယ်
၅. ငှက်ပျောဖူးတွင် အထက်သို့ ရှူးတက်သွားပြီးမှ ထိပ်ဆုံးတွင် ထီးတော်နဲ့ ပြန်အုပ်ထားသော ဒီဇိုင်းမှာ လည်း ဖူးမြော်သူရဲ့စိတ်ကို ထိပ်ဆုံးသို့ အာရုံစုစည်းစေပြီးမှ ထီးတော်ကို ကြည်ညိုနိုင်စေရန် ဆွဲဆောင် သော လက်ရာမြောက်သည့် ဗိသုကာပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
၆. ပုထိုးတော် ဒီဇိုင်းဖြစ်သော အာနန္ဒာ ဘုရားသည် ထိပ်ပိုင်းက ဟိန္ဒူ ဒီဇိုင်းဟု ထင်ရသယောင်၊ ဆင်သ ယောင် ရှိသော်လည်း လိုဏ်သုံးထပ် လုပ်ထားပုံမှာ လုံးဝမတူ ခြားနားခြင်းရဲ့ သက်သေဖြစ် ၊ ရွှေတိဂုံ ကဲ့သို့ မတည်ရခြင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသ ရပ်ဝန်းတွင် တည်ရသည့်အတွက် ဘုရားဖူးလာသူများရဲ့ ကြည်ညိုစိတ်ကို ဖန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပုထိုးတော်ကဲ့သို့ တည်ခြင်း၊ လိုဏ်နံရံများရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာများသည် အကောင်းဆုံး သက်သေဖြစ်ခြင်း
၊ အပြင်ဘက်ဆုံး ကျောက်ပန်း ဇကာသည် ဖုန်စစ်ရန်၊ အလယ်နံရံရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာသည် နေရောင်စစ်ရန် ဖြစ်ပြီး အတွင်းဘက်ဆုံး ရုပ်ပွားတော်များ တည်ထားရာ ဂန္ဓကုဋီ၏ နံရံရှိ ကျောက်ပန်း ဇကာသည်ကား လေပူစစ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်ပန်း ဇကာများရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ခြင်း။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားဖူး လာသူသည် နေပူ၊ လေပူ၊ ဖုန်ထူ တို့ကို ဖြတ်ပြီး ဘုရားဖူး လာရာတွင် ပုထိုးတော် ထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် လူရော စိတ်ပါ အေးချမ်း တည်ငြိမ် သွားစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊
နေပူထဲမှ လာသော စိတ်ပျံ့လွင့် နေသော ဘုရားဖူးသူကို အလင်းရောင် စစ်ထား သောကြောင့် မှောင်သယောင် အလင်းမှိန်သော ပုထိုးတော်ထဲတွင် စိတ်ကို တည်ငြိမ် စေပြီးမှ ရုပ်ပွားတော် ပေါ်တွင်သာ အလင်းကျ ရောက်နေ စေရန် စီစဉ်ထားသော ဗိသုကာ လက်ရာကြောင့် အမှောင်ထဲတွင် လင်းနေသော ရုပ်ပွားတော်ကို ဖူးမြော်စေလေရာ ကြည်ညို သဒ္ဓါစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊
စိတ်ပညာကိုပါ အသုံးပြုကာ ဘုရားကို ထိုကဲ့သို့သော ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဆောက်လုပ်သော ဗိသုကာလက်ရာကို အရှေ့တောင် အာရှ တခွင်တွင်ရော၊ တကမ္ဘာလုံး တွင်ပါ မတွေ့ ရှိရခြင်း
ထိုထိုသောအကြောင်းတို့ကို ဟိန္ဒူဘုရားများ တွင်သာမက မည်သည့်လူမျိုး၊ ဘာသာရဲ့ အထိမ်းအမှတ် မှာမှ မမြင်ဖူး သောကြောင့် မြန်မာ့လက်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီပုထိုးများရဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာသည် အတုမရှိ၊ ကိုယ်ပိုင် လက်ရာသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများသည် ဘုရားစေတီ ပုထိုးများ သို့ ပုံမှန် မဟုတ်တောင် မကြာခဏ သွားလာ ဖူးမြော် ကြသည်။ အထူးသဖြင့် နေ့ကြီးရက်ကြီးများတွင် လူငယ် လူကြီးမရွေး ဘုရားဖူး သွားကြလေသည်။ သူလိုကိုယ်လို ဘုရားဖူးနေကျ ဖြစ်သောကြောင့် ဖူးမယ့် သာ ဖူးလိုက်သည်။ ဘုရားကို ဘာလို့ သည်လို တည်ထား သလဲ ဆိုတာ၊ ဘုရားမှာ ဘာလို့ သည်လိုနေရာ တွေ ထည့်ထားသလဲ ဆိုတာ သေချာ စဉ်းစားရှာဖွေကြသူ အင်မတန် နည်းပါသည်။ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေကြသူသာများပါသည်။
ဘာကြောင့် ပန်းတင်ခုံလို့ခေါ်ပြီး သည်လိုပုံစံ တည်ထားရသလဲ။ ဘာကြောင့် ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရ သလဲ။ ဘာကြောင့် ခေါင်းလောင်းမှောက်မှာ ရင်စည်းကို ဘာ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ထည့်ထားသလဲ။ ဘုရားမှာ ဘာကြောင့် ကြောက်စရာ ဘီလူးပန်းဆွဲ ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာ ပါနေရသလဲ။ ဖောင်းရစ်က ဘာလို့ ခုနှစ်ရစ် ဖြစ်နေရသလဲ။ ကြာကို ဘာကြောင့် မှောက်လိုက် လှန်လိုက် ထည့်ထားရသလဲ။ ဘာကြောင့် ကြာပန်းကိုမှ ရွေးထည့်ရသလဲ.. စသည် စသည်ဖြင့်
ယခု ဤစာဖတ်နေသော.. မိတ်ဆွေကရော..
( ကျနော်သည်လည်း.. ဤသို့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေခဲ့ပါသည် ။ မိမိ၏ လေ့လာမှု အားနည်းခြင်းကြောင့်
အခြားသော ဘာသာခြား သူငယ်ချင်းများမှ မေးမြန်းသောအခါတွင် သီးသန့် အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်..ဒါပေမယ့် မိမိမှာ မသိသေးကြောင်း ၀န်ခံ ဖြေကြားခဲ့ရသည်က များပါသည်။ ကဲ့ရဲ့ သူများရှိသောအခါတွင်လည်း လူငယ်စိတ်ဖြင့် မခံချင်စိတ်များကြောင့် အချို့ သော ဥပမာများဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့ရသော်လည်း ရင်ထဲတွင် မကောင်းလှပါ..ကျေနပ်အားရမှု မရှိခဲ့ပါ )
ဘာကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီတွေကို ယနေ့ တွေ့ မြင်နေရသော ပုံများအတိုင်း တည်ထားခဲ့ပါသလဲ
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီတစ်ခု ၏ အောက်ပါ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အမည်များက မည်သို့ သော အချက်များကို ရည်ညွှန်းနေကြသနည်း..
၂။ပစ္စယာ ၃ ဆင့်
ယင်းတို့ အပြင် စေတီအနီးရှိ ဟင်္သာနားနေဟန် တံခွန်တိုင်ကို ဘာကြောင့် တည်ဆောက်ထားကြသလဲ....
၁. ပန်းတင်ခုံကို အကျယ်ဆုံးနဲ့ အောက်ဆုံးမှာထားတာဟာ လူ့စိတ်တွေထဲမှာ လောကုတ္တရာနည်းနဲ့ ပိုင်းခြားရင် အဆင့်အနိမ့်ဆုံးလူမှာ လိုချင်မှုတွေ အများဆုံးဖြစ်လို့ အောက်ဆုံးက ပန်းတင်ခုံကို အကျယ်ဆုံး ထားပေးပြီး ဥပမာပေးခြင်း၊ ဘုရားကို ပန်းကပ်လှူလိုသူတွေ ပန်းတင်လို့ရအောင် အမြင့်ခုံပုံ ဆောက်လုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ပန်းတင်ခုံဟု အမည်ပေးခြင်း
၂. ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရခြင်းမှာ တဏှာ ၃ပါးခေါ် လိုချင်မှုအုပ်စု ၃စုကို ရည်ညွှန်းကြောင်း၊
(နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်မှုဖြင့် မရနိုင်၊ အရာအားလုံး သူ့သဘောနဲ့ သူ ဖြစ်ပျက်မှုကို သိပြီး အစွဲကျွတ်ခြင်းဖြင့်သာ နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကျင့်တရားမရှိဘဲ နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်ခြင်းသည် ဒိဌိ တမျိုးသာဖြစ်သည်။)၊
ကာမဂုဏ်တရားများ (ရုပ်အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ) တို့ကို လိုချင်ခြင်း ဟူသော လောကုတ္တရာနယ်ရဲ့ အောက်ခြေက တဏှာသုံးပါးကို သတိပေးရန် ပစ္စယာ ကို ၃ဆင့် ထားရခြင်း
၃. ခေါင်းလောင်းမှောက်ခေါ် သပိတ်မှောက်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်မှာ အထက်ပါ သံသရာလည်စေကြောင်း အချက်များကို မပြုလုပ်၊ လက်မခံ ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် သပိတ်မှောက်သည်၊ ခေါင်းလောင်းမှောက်သည်ဟု လမ်းညွှန်ခြင်း
၄. သံသရာကို ဘီလူးလိုကြောက်ပြီး အထက်နိဗ္ဗာန် ပန်းကို လှမ်းဆွဲစေချင်သည်ဟူသော သတိပေးချက်ကို ဘီလူးပန်းဆွဲဖြင့် ဥပမာပေးခြင်း၊
ပုံပန်းသဏ္ဍာန် ၅ခုမြောက်တွင် ဘီလူးပန်းဆွဲကို ထားခြင်းမှာ
ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးရှိသည့်အနက် ၅ဆင့်မြောက် ဘယဥာဏ်ကို ညွှန်းဆိုလိုသောကြောင့် သည်နေရာတွင် ဘီလူးပန်းဆွဲ ကို ထားခြင်း၊
(အထက် မြန်မာပြည်တွင် ဘီလူးကို ပါအောင်ထည့်ပြီး အောက်မြန်မာပြည် တွင်မူ ဘီလူး ထားခြင်း အဓိပ္ပာယ်ကို တလွဲတွေးသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘီလူးကို အပါယ်လေးဘုံသားဟု သတ်မှတ်ကာ ဘုရားတွင် မထားချင်သဖြင့် လည်းကောင်း ဘီလူးမပါဘဲ ပန်းဆွဲကိုချည့်သာ ထည့်လေ့ရှိသည်ကို သီးခြား မှတ်သား နိုင်ပါသည်။ )
သည်နေရာတွင် ပန်းဆွဲ ၁၆ခု ရှိနေသည်မှာ ရိပ်သာများတွင် ယောဂီများကို တရားစစ်ရာတွင် အဆင့်သတ်မှတ်သော သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ် မရခင် အခြေခံ ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးကို ညွှန်းခြင်း
မိမိရဲ့ စိတ်နဲ့လုပ်ရပ်ကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟူသော ထိမ်းကွပ်မှု ၃မျိုးနှင့် ထိန်းကွပ်ရန် သတိပေးလိုခြင်း
၇. စေတီတော်ရဲ့ ၁၄ဆင့်မြောက်မှာ ကြာမှောက်ကို ထားခြင်းသည် တရားအားထုတ်နေသော ယောဂီဖြစ်လျက် သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ် ရခါနီး ဥာဏ်စဉ် ၁၄ဆင့်မြောက် ရောက်နေစေဦးတော့ သံသရာအတွက် စိတ်မချရသေးဘဲ ထိုအချိန်တွင် မကောင်းမှုအကုသိုလ်များကို မှောက်မှားစွာ လုပ်မိနိုင်သေးကြောင်း၊ ထိုသို့လုပ်မိပါက အောက်သံသရာ အပါယ်လေးဘုံသို့ မှောက်မှောက်မှားမှား ပြန်လည်ကျရောက်နိုင်သေးကြောင်း သတိပေးလိုခြင်း
၈. ကြာမှောက်နှင့် ကြာလှန်ကြားရှိ ရွဲလုံးများသည်ကား ဒဿန နယ်ကို ပြဆိုပြီး ဥာဏ်စဉ် အမှတ် ၁၅နှင့် ၁၆သည် အခြားမရှိ ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး လောကီသားဘ၀၊ လောကီနယ်မှ လောကုတ္တရာသားဘ၀၊ လောကုတ္တရာနယ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းကို ပြဆိုခြင်း
၉. ကြာလှန်သည် ထို ဥာဏ်စဉ် ၁၆ပါးလုံးကို ရရှိပြီးပါက သောတာပန် ဖြစ်ပြီ ဖြစ်ပြီး အောက်သံသရာကို ပြန်စရာမရှိတော့ဘဲ အထက် မဂ်ဖိုလ်များကို ရရှိကာ အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘ၀သာ သံသရာမှာ ကျင်လည်ရပြီး အထက် နိဗ္ဗာန်ကိုသာ ၀င်စံရသောကြောင့် အထက်သို့လှန်တက်နေသော ကြာလှန်ကို ပုံဥပမာ ပေးထားခြင်း
၁၀. သင်္ကေတ၀ါဒ အရ ကြာပန်းကို ထားရခြင်းမှာ ရေမှာ နွံမှာ ပေါက်ဖွားသော ကြာပင်ဖြစ်လျက် ရေမစို၊ နွံမလူး၊ မွှေးကြိုင် သင်းပျံ့ခြင်း ရှိသော ကြာပန်းကဲ့သို့ လောကီနယ်မှ လူသားအဖြစ်မှ လောကုတ္တရာ နယ်သား ဘုရားဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံ အောင်မြင်ရာတွင် ဘုရားနှင့်ကြာပန်း တို့တွင် အဓိပ္ပာယ် ဆင်တူသော ဂုဏ်ရည်ချင်းကို ဥပမာ ခိုင်းနှိုင်း လိုသောကြောင့် ကြာပန်းကို သုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဗျာဒိတ် ခံစဉ်တွင်လည်း ကြာပန်းကိုသာ ကပ်လှူခြင်း၊ ဖွားစဉ်ကလည်း ကြာပွင့်များ အလိုလိုပေါ်လာကာ ခြေချရာတိုင်း ခံလာရခြင်း တို့ကြောင့် ကြာပန်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ သင်္ကေတ ဖြစ်ခြင်း၊
ငှက်ပျောဖူး ဆိုတာ ငှက်ပျော တစ်ပင်ရဲ့ နိဂုံး သင်္ကေတ ပါပဲ။ ပေတစ်သီး ကျီးတစ်သား ငှက်ပျော တစ်ပင် တဲ့။ ငှက်ပျော တစ်ပင်ဟာ ငှက်ပျောဖူး ထွက်လာပြီး ငှက်ပျော တခိုင် သီးပြီးတာနဲ့ သူ့ဘ၀ ပြီးဆုံး ရသလို ကြာလှန် အဆင့်ဖြစ်တဲ့ (သံသရာမှာ အောက်သံသရာကို လည်စရာ မလိုတော့တဲ့ နိဗ္ဗာန် ရောက် ဖို့ သေချာ နေတဲ့) သောတာပန် အဆင့်ကို ရောက်ပြီ ဆိုရင် သံသရာမှာ ဆက် ရှင်သန် ကျင် လည် စရာ မလိုတော့တဲ့ အတွက် သံသရာ ပြီးဆုံးတဲ့ အတွက် ငှက်ပျောဖူးနဲ့ တင်စား တာပါတဲ့။ ငှက်ပျောဖူး ပြီးရင်တော့ အထက် မှာ ထီးတော်ပဲ ရှိတော့တာမို့ ထီးတော်နဲ့ ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းကို အောက်မှ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပေဖူး ပုံ မသုံးဘဲ ငှက်ပျောဖူး ပုံ သုံးရခြင်း အကြောင်းက မျက်စိ အမြင်ထဲ မှာ ပုံပန်း သဏ္ဍာန် အရ ကြည်ညို သပ္ပါယ ဖြစ်မယ့်ပုံကို ရွှေးချယ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ တစ်ခြားအကြောင်းကြောင့်ဆိုရင် သိတဲ့သူများ ဖြည့်စွက်ပေးကြစေလိုပါတယ်။ သိရှိရသလောက် ငှက်ပျောဖူးဟာ အထက်ကိုပဲ တသမတ်တည်း ရှူးပြီး ထီးတော် ခုနှစ်ဆင့် အဖြစ် တက်သွား သလို သောတာပတ္တိ မဂ်ဥာဏ် ရပြီး သား သူဟာလဲ အထက်မဂ် ဖိုလ် ၇ဆင့် ဆီကို တသမတ်တည်း အစဉ်လိုက် ရရှိ ရောက်ရှိ သွားတဲ့ သဘောကို ဖော်ကျူးတဲ့ အနေနဲ့ ငှက်ပျောဖူးကို ကြာလှန်နဲ့ ထီးတော် ၇ဆင့်ကြား အချိတ်အဆက် မိမိ တည်ထား ဆောက်လုပ် ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ရွှေတိဂုံ ဘုရား သမိုင်း စာအုပ်ငယ်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် )
၁၁. ထီးတော် (၇) ဆင့်သည် အထက်ဖိုလ် ခုနှစ်ပါးကို ပြဆိုခြင်း
၁၃. စိန်ဖူးတော် သည် အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန်မြတ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း။ အခြားဓာတ်များကို ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရ တို့ဖြင့် ပြင်လို့ရနိုင်သေးသဖြင့် သင်္ခတဓာတ်ဟုခေါ်ပြီး နိဗ္ဗာန်သည်ကား မည်သို့မျှ ပြန်လည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့သော ဓာတ်ဖြစ်သဖြင့် အသင်္ခတဓာတ်ဖြစ်ကြောင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်း
(က) ကာဗွန်ဒြပ်စင် သည် မီးသွေး၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဂျာမနီယမ်နှင့် စိန်ဆိုပြီး လေးဆင့်ရှိရာတွင် စိန်အဆင့်တွင် ကာဗွန်ဒြပ်စင်သည် အသန့်စင်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီဖြစ်သလို သောတာပန်၊ သကဒါဂမ်၊ အနာဂမ်နှင့် အရဟတ္တ မဂ်ဖိုလ်ရပြီးသူ ဘုရား၊ ရဟန္တာ တို့တွင် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဘုရားသည် ကိလေသာ လုံးဝစင်ကြယ်ဆုံး အဆင့်ရောက်နေသည်ကို ပြဆိုခြင်း၊
(ခ) အမာဆုံး၊ အသန့်စင်ဆုံးနှင့် ဓာတ်ပြိုကွဲမှု လုံးဝမရှိတော့ခြင်း ဟူသော ဂုဏ်ရည်တူချင်း ခိုင်းနှိုင်းဥပမာပေးထားခြင်း
သည်နေရာတွင် ငှက်မြတ်နားအဆင့်တွင် အခက်အလက်များမှာ ငှက်မြီးသဖွယ် ဖြာထွက်နေသော်လည်း စိန်ဖူးတော်ကို ဘာကြောင့် တလုံးတည်း ထားသနည်းဟူသော မေးခွန်းရှိလာပါသည်။ ရဟန္တာ ကိုယ်တော် ကြီး များသည်ကား အချင်းချင်းတွင် ဘုန်းချင်း၊ တန်ခိုးချင်း၊ ပညာချင်း၊ လာဘ်လာဘချင်း မတူညီဘဲ သံသရာတွင် သူတို့အသီးသီး ပြုခဲ့ကြသော အကျိုးပေး အားလျော်စွာ ကွဲပြားခြားနား ကြသော်လည်း နိဗ္ဗာန်သို့ ၀င်စံတော်မူကြသည့် အခါတွင်ကား တူညီသော တခုတည်းသော အသင်္ခတဓာတ်သို့သာ သက်ရောက်ကြသဖြင့် စိန်ဖူးတော်ကို တစ်ဆူတည်း ထားခြင်းဖြစ်လေသည်။
၁၄. အထက်ပါအချက်များနဲ့ ပြည့်စုံပါက ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နည်းစနစ်ဖြင့် မဟာ သတိပဌာန သုတ္တန် ရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ ဆောက်လုပ် တည်ထား ကိုးကွယ်သော စေတီဖြစ်ပြီး စေတီ တည်ရခြင်း အကြောင်း အနှစ်တရား များကို သိရှိပြီး ကြည်ညို ပူဇော်ပါက အဖိုးမဖြတ် နိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးတရားများ ခံစားကြ ရမည် ဖြစ်လေသည်။သို့သော် အထက်ပါ အချက်များနဲ့ မပြည့်စုံသော စေတီဖြစ်ပါက ဓာတ်ရိုက် ဓာတ် ဆင်၊ ယတြာ၊ အထက်လမ်း၊ အစီအရင်များနဲ့ တည်ထားသော စေတီ မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။ ထိုစေတီ များကို ဖူးမြော်ပါက စီရင်သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖူးမြော်သူရဲ့ စိတ်စေတနာ အလိုက်သာ အကျိုး ပေးမည်ဟု မှတ်ယူ နိုင်မည် ထင်ပါသည်။
ထို့ပြင် ဘုရားများတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော တိုင်ထိပ်တွင် ဟင်္သာနားနေဟန် တံခွန်တိုင်အကြောင်းကိုလည်း ရှာရှာဖွေဖွေ သိလိုက်ရသည်။ မာနတံခွန်တက်နေသူများ ဘုရားထံမှောက် ရောက်လိုလျှင် မာနကို အရင်ချ ခဲ့ရန် သတိပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေးခေတ်က ဘုရားသို့ လာသူများသည် တံခွန်တိုင်ကို မြင်သည့်အရပ်မှ စတင် ကာ မာနချသည့်အနေဖြင့်ရော အရိုအသေ ပေးသည့် အနေဖြင့်ပါ ဖိနပ်ချွတ်ခဲ့လေ့ရှိကြောင်း၊ မာနခံနေပါက တရားမရနိုင်ကြောင်း၊ မာနစွဲကြီးသူသည် သက္ကာယဒိဌိခေါ် ငါစွဲကြီးသော သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ငါစွဲ ပေါ်တွင်သာ မာနတက်လို့ ရသောကြောင့် မာနကြီးသူသည် တရားရဖို့ ခဲယဉ်းကြောင်း၊ ယင်းမာနကို ဘုရားပေါ်မရောက်ခင် အဝေးကတည်းက သတိပေးသည့် အနေဖြင့် တံခွန်တိုင်ကို မြင့်မြင့် တည်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရလေသည်။
သည်လောက်တောင် စေတီရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုချင်းစီ အတွက်ရော အားလုံးခြုံငုံပြီးပါ အနှစ်ပါပါ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ ပုံသဏ္ဍာန်များကို ရွေးချယ်စီစဉ်နိုင်သော ရှေးမြန်မာကြီးများရဲ့ သင်္ကေတ ၀ါဒကို အံ့သြချီးကျူးလို့ မဆုံးနိုင်တော့ပါချေ။ ထို အဟောင်းများရဲ့ အနှစ်များကို မသိပါဘဲ လျက်ဖြစ်စေ၊ သိလျက်နဲ့ ဖြစ်စေ ငါက အသစ်ထွင်တယ် ဆိုသော စကားကို လက်ကိုင်ပြုပြီး အဟောင်းကို ဖျက်ဆီးကာ အသစ်ထွင်ခြင်း၊ အဟောင်းနဲ့ အသစ်ကို ရောခြင်းများကို ပညာမဲ့ပီပီ ပြုလုပ်နေကြသူ တချို့ကို တွေ့တိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။ သူတို့စိတ်ထဲတွင်တော့ သမိုင်းတွင် ငါ့ထက်တော်သူမရှိစေရ၊ ငါက သမိုင်းကို ဖျောက်ချင်သလို၊ ပြင်ချင်သလို ပြင်နိုင်သည်ဟု တလွဲမာနရှိဟန်တူလေသည်။ ပညာရှင်တို့ စိတ်ထဲတွင်တော့ အ၀ီစိကျမည့် သမိုင်းတရားခံများ ဟု သာ သတ်မှတ်ကာ သနားလေမည်။ အဟောင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ကို အရင်လေ့လာပြီး အဟောင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ထက်သာသော အသစ်ကို ထွင်နိုင်ပါမှ တိုးတက်ခြင်း အစစ် အဖြစ်ကြီး ဖြစ်ပေမည်။ သို့မဟုတ်ပဲ အသစ်ဖြစ် ပြီးရော လျှောက်လုပ်လျှင်ကား အသုံးမကျ လှသော အစုတ်ပလုတ်များနှင့် သည်လို လျှောက်လုပ်ရင် အစုတ်ပလုတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တတ်တယ် ဟု ဥပမာ ပြစရာများသာ ကျန်ခဲ့မည် ကိုလည်း သတိတရား ရလိုက်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ယနေ့ ခေတ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီး အပါအ၀င် မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ရှိ ထေရ၀ါဒစေတီတော်များတွင် အခြားသော အယူဝါဒများ၏ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများဖြင့် စနစ်တကျ အပင်းသပ်ခံထားရသော အချက်အလက်များကို တင်ပြလိုပါသည်။ ယခု ပိုစ့်တွင် အသေးစိပ်တင်ပြလိုသော်လည်း. သီးခြား ခေါင်းစဉ်ခွဲ၍ တင်ပြလိုပါသည်။ မိမိထက် ပို၍ နားလည်တတ်ကျွမ်းသောသူများမှလည်း ပိုစ့်များ ရေးသားစေလိုပါသည် ။ ယင်းမှာ စေတီတော် အရပ် ( ၈) မျက်နှာရှိ ဂြိုလ်ခွင်များ ၊ ဘိုးတော်ရုပ်များ ၊ နတ်ကွန်းများ နှင့် အခြားသော ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီများ နှင့် အနည်းငယ်မျှ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများမှာ ထေရ၀ါဒစေတီများပေါ်တွင် တရားဝင် ဗီဇာ ဖြင့် မတော်တရော်
နေရာယူထားမှုများဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်များကို ငယ်စဉ်က စစ်ကိုင်းတိုင်း အင်းတော်မြို့ နယ် မာန်လည်ကျေးရွာရှိ မာန်လည်ဆရာတော်တည်ထားခဲ့သော ထေရ၀ါဒစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ထူးခြားချက်ကို သတိပြုမိရာမှ မေးမြန်းကြည့်ရာ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
( ဤပိုစ့်ပါအချက်အလက်များအား.. ရွက်ဝါဘလော့ ၊ မခွန်မြလှိုင် နှင့် ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးကောသလ ဟောကြားတော်မူသော
နှလုံးသားဝယ် ဘုရားတည် တရားခွေများမှ ရယူ၍ ဓမ္မဒါန ပြုပါသည် )
အချက်အလက်များဖော်ပြရာ၌ တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းချွတ်ချော်ခဲ့သော် ဝေဖန်ထောက်ပြ၍ ပြင်ဆင်ပေးကြပါရန် ...
ခန္ဓာ မပျက်သုန်းမီ ကိုယ့်ဒုက္ခကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လက်စသိမ်းနိုင်ကြသော သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ..
* “ ထေရ” ဆိုသည်မှာ ရဟန်းသက် (၁၀) ၀ါ ရရှိပြီးသော မထေရ်ကို ဆိုလိုပြီး၊
* “ ၀ါဒ” ဆိုသည်မှာ ခံယူချက်ကို ဆိုလိုသည်။
* ထို့ကြောင့် “ထေရ၀ါဒ” ကို စီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရလျှင် ရဟန်းသက် (၁၀) ၀ါ နှင့် အထက် ရှိသော မထေရ်ကြီးများ၏ ခံယူချက်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရပါသည်။ 
1. သက်ရှိလူသား တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
2. သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
3. ကာမဂုဏ် ဖေါက်ပြန်မှု, အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
4. မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
5. မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း, ရောင်းဝယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
2. စောင့်ထိန်းမှု သီလရှိရမည်။
3. ကောတုဟလ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ။
4. ကံတရားကို ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်။
5. သာသနာတော်ပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှုကို မရှာမှီးရ -
# စတုဘုမ္မိက မဟာသတိပဋ္ဌာန်(ငှက်တွင်း)ဂိုဏ်း။
ထေရ၀ါဒ နဲ့ မဟာယာန ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို သုံးသပ်ရာမှာ သံဃာသနာတင်မှတ်တမ်းတွေဟာ မပါမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး (၃) လ အကြာမှာ အရှင်မဟာကဿဖ ဦးစီးပြီးတော့ ပထမသံဃာယနာကို ရာဇဂြိုလ်မှာလုပ်တာ သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ အရှင်မဟာကဿဖ ရဲ့ သုံးသပ်စီမံပုံ ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ။ ဘုရားရှင်ခေတ် ရဟန္တာပေါင်း သောင်း၊သိန်း ချီပြီးရှိနေတဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အရှင်မဟာကဿဖ က သံဃာယနာအတွက် အဖွဲ့ဝင် (၅၀၀) ပဲ ရွေးချယ်မယ်လို့ ကြေငြာတယ်။ သံဃာ ယနာ (၆)ကြိမ်မှာ ရဟန်းအရေအတွက် (၅၀၀)ပဲ ၊ ပင့်ဆောင်တာ (၂) ခုပဲရှိတယ်။ ပထမနဲ့ စတုတ္ထ အကြိမ်တွေပေါ့ ။ စတုတ္ထကတော့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တဲ့ ကာလမို့ (၅၀၀) ပဲ တက်ရောက်တာ သဘာဝကျပေမယ့် ပထမသံဃာ ယနာကတော့ ဒီထက်များသင့်တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှင်မဟာကဿဖ က အဖွဲဝင်ရွေးချယ်မှုအတွက် အချက်(၂)ချက် ကန့်သတ်လိုက်တယ်။ (၁) ရဟန္တာ စင်စစ်ဖြစ်ရမယ် ။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ရဟန္တာ စင်စစ်ဖြစ်မှ အဂတိတရား(၄) လိုက်စားမှု ကင်းမယ်။ သံဃာယနာ အခမ်းအနားမှာ ငါ့ဆရာရဲ့ နည်းကမှ မှန်တာ ၊ ဒီနည်းက မမှန်ဘူး စတဲ့ ငါစွဲ၊ဆရာစွဲကင်းမယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးပုံတွေ အဘိဓမ္မာပိုင်းတွေ မှာ ဆရာဝါဒတွေ ပါနေလို့ ဖြစ်တယ် ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် အငြင်းပွားတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလ်ိမ့်မယ် ။
(၂) ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ တရားတွေ အားလုံးကို သိရမယ် ။ ပိဋကတ် (၃)ပုံ ကို တတ်ကျွမ်းပြီးသားဖြစ်ရမယ် တဲ့ ။ စာလိုပြောရင်တော့ ပဋိသမ္ဘိဒါ (၄)ပါး ရ ရဟန္တာ ဖြစ်ရမယ် လို့ ဆိုတယ်။ ပိဋကတ် (၃)ပုံ ကို အကုန်သိနေမှလဲ ဒီတရားကို ဘုရားဟောတယ် ၊ မဟောဘူး ဆိုတာ ခွဲခြားပေးနိုင်မယ်။ စိစစ်ပေးနိုင်မယ်လေ။ ပထမဆုံး အကြိမ် လုပ်ရတာဆိုတော့ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ၊ ဘီစီ (၅၈၈) ၊ ၀ါဆိုလပြည့် စနေနေ့ မှာ ဘုရားရှင်စဟောတဲ့ ဓမ္မစကြာတရားတော်ကနေ ၊ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈) ၊ ဘီစီ (၅၄၃) ၊ ကဆုန်ုလပြည့် ၊အင်္ဂါ နေ့ မှာ နောက်ဆုံးဟောတဲ့ မဟာပဋိနဗ္ဗာန သုတ်တော် အထိ အားလုံးကို စနစ်တကျ အတိအကျ စုဆောင်း မှတ်တမ်းလုပ်ကြရမှာပေါ့ ။
ပိဋကတ် (၃)ပုံကို အသိဆုံးကတော့ ညီတော်အာနန္ဒာပေါ့ ။ဒါပေမယ့် သူက သောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးဘူး။ ဒီတော့ အရှင်မဟာကဿဖ က အခြားသော သံဃာတော်များရဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုယူပြီး အရှင် အာနန္ဒာကို အချိန် (၃)လအတွင်း လုပ်ရန် တာဝန် (၂)ခုပေးတယ် ။
(၁) ဘုရားဟောတရားတော်များအားလုံးကို အရေအတွက်၊ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ် အတိအကျတင်ပြရမယ်။ (၂) ရဟန္တာဖြစ်အောင် တရားကျင့်ရမယ်။(မလွယ်ဘူးနော် ၊ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးပဲ ရှိတယ်။ အရှင် အာနန္ဒာ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ တရားတော်တော်နဲ့ မတက်နိုင်တာတွေ ၊ ရက်နီးလာလို့ Pressure များလာတာတွေ အများကြီးပဲ ) ထားပါတော့ ။ အရှင် အာနန္ဒာရဲ့ ၀န်ခံချက်ရပြီးတာနဲ့ အရှင်မဟာကဿဖ က ဒီ ရဟန္တာ (၅၀၀) ကလွဲရင် တခြားသံဃာတွေ အားလုံးရာဇဂြိုလ်က ထွက်သွားရမယ် ။ တခြားဒေသတွေမှာပဲ ၀ါ ဆိုရမယ်လို့ အမိန့် မှတ်တယ်။
အရှင် အာနန္ဒာ ဓမ္မ နဲ့ အရှင်ဥပါလိ ၀ိနယကို တင်သွင်း လျှောက်ထားကြတယ်။ ဓမ္မဆိုတာ သုတ္တန် + အဘိဓမ္မာ လို့ နားလည်ရင် အဘိဓမ္မာကို ဘုရားမဟောဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာပြီးသွားမယ်။
သံဃာယနာမှာ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ၀ိနယ အပိုင်းမှာပဲ ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ညီတော်အာနန္ဒာကို တစ်ခုမှာတယ်။ …. “ ညီတော် အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရား လွန်သောအခါ သံဃာတော်တို့သည် ပညတ်ထားတဲ့ သိက္ခာပုဒ်တွေထဲမှာ အငယ်စား အသေးအနုပ် ( ခုဒ္ဒါနုခုဒ္ဒက) သိက္ခာပုဒ်တွေကို နုတ်ပယ်လိုက နုတ်ပယ်လော့ “ ….. ဒီလိုမှာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သောကတွေနဲ့ ပူဆွေးနေတဲ့ အာနန္ဒာက…….. “အငယ်စား အသေးအနုပ် ( ခုဒ္ဒါနုခုဒ္ဒက) သိက္ခာပုဒ်တွေဟာ ဘာတွေလဲ ဘုရား” ….€¦. â€œဆိုတာ မေးလျှောက်ဖို့ မေ့နေခဲ့တယ်။ သူကလဲ အဲဒီတုန်းက သောတာပန်ပဲ ရှိသေးတာကိုး။
ဒီတော့ သံဃာယနာမှာ ဘာတွေကို ပယ်မလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတော့ အရှင်မဟာကဿဖ က - “…ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရှင်မြတ် ပြုထားတဲ့ အရာတွေကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်သာ ပယ်ဖျက်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ တို့က ပယ်ဖျက်တယ်ဆိုပါတော့ ၊ ပုထုဇဉ် ရဟန်း၊ရှင်လူတွေက â€¦ကြည့်စမ်း - ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့ တေဇောဓာတ်တောင် မငြိမ်းချင်သေးဘူး၊ သူ့တပည့် ဆိုတဲ့ သံဃာတွေက သူ့စကားတွေကို ပယ်ကုန်ကြပြီလို့ ဆိုကြလိမ့်မယ်။ ဒီလို အကြည်ညိုပျက်ရင်( ရဟန္တာတွေကို စော်ကားပြောဆိုမိရင်) သူတို့ အပြစ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ။ဒီတော့ ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားချမှတ်ခဲ့တဲ့ ၀ိနည်းတွေကို နဲနဲမှ မပြင်ကြပါနဲ့ ….” လို့ မိန့်ကြားခဲ့တယ်။ ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး (၆)ယောက်ရဲ့ တပည့်တွေကလည်း ခေါင်းထောင်လာဦးမယ်။
ဒုတိယ သံဃာယနာမှာတော့ ၀ဇ္ဖီတိုင်းသား ရဟန်းများ (ဒေ၀ဒတ်ရဲ့ တပည့်များ)က အဓမ္မ၀တ္ထု (၁၀)ပါးတောင်းဆိုကြတယ်။ နေ - လက်တစ်သစ်လွဲသည်အထိ ဆွမ်းထမင်းစားရန် ၊ သေန(အရက်ပျော့ပျော့)သောက်ရန် (အခုလည်း သောက်ကြတာပဲလေ) ၊ ရွှေ ၊ငွေများကို သာမာန်လူများလို ကိုင်တွယ် အသုံးပြုရန် စသည်တွေ တောင်းဆိုလာရာမှာ သာသနာတော် ညစ်နွမ်းမှာဆိုးပြီး ဒုတိယ သံဃာယနာကို သာသနာနှစ်(၁၀၀)မှာ တင်ခဲ့ရပြန်တယ်။ အတိုချုပ်ရရင် ဒီ ရဟန်းပျက် (၁၀၀၀၀) ကို သံဃာယနာတင် ရဟန္တာ (၇၀၀) ၊ ဒကာတော် ကာလာသောကမင်း နဲ့ ပြည်သူတွေက တိုင်းပြည်က နှင်ထုတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒီရဟန်း ( ၁၀၀၀၀ ) ခန့်ဟာ ကောသမ္ဘီပြည် ၊ ဟိမ၀န္တာ တောင်ခြေနားမှာ ဘုရင်တစ်ပါးက ခိုလှုံ ခွင့်ပေးလိုက်လို့ စင်ပြိုင်. သံဃာယနာတင်ကြတယ်။ တက်ရောက် ရဟန်း (၁၀၀၀၀) ဆိုတော့ ပိုပြီးတောင် အင်အားကြီးတယ်ဆိုပြီး တော့ ….မဟာသံဃိကဂိုဏ်း…. လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ စာအုပ်တွေမှာ….မဟာသင်ဂီတိဂိုဏ်း…..လို့ အကိုဖတ်ရတယ်။ ဒါကလည်း တောင်ပိုင်းဟိနယနသုံး ဒီပ၀င် ၊ မဟာဝင် ၊ ပါရာဇိကဏ် အဋ္ဌကထာ တို့ က အမည်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ မဟာယာန ရဲ့ အစဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဂိုဏ်းကြီး (၂)ဂိုဏ်းကနေ မကြာခင်မှာပဲ (၁၀) ဂိုဏ်းအထိ ဖြစ်သွားတယ်။ အခုတော့ ( ၃၀၀ ) ကျော်နေပြီတဲ့ ။ ဂိုဏ်းတွေ ကွဲသွားကြပုံကို ( သံဃာယနာသမိုင်း စာအုပ်မှာ ဖတ်ပါနော် ။ မရေးတော့ဘူး။ www.elibrary.com.mm မှာ ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီစာအုပ်ရော တခြား အများကြီးရှိတယ်။ )
ဒီလိုနဲ့ မဟာယနတွေကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်ကို ကိုင်စွဲပြီး ကြိုက်သလို ပြင်ကြရာကနေ ဒီလောက်ကွာကုန်ကြတာပဲ ။ သူတို့ကလည်း ဘုရားမှာသွားတာပဲ ၊ လိုအပ်ရင်ပြင်မယ်လို့ ခံယူထားတော့ မှန်သလိုဖြစ်နေတာပါပဲ ။ အကြီးအကျယ်ကွာတာက၀ိနည်း ပိုင်းမှာပေါ့ ။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အောက်မှာ ဆက်ရှင်းပြမယ်။ ဒီတော့လည်း မူရင်းအတိုင်း မပြင်တာက ထေရ ၀ါဒ …မထေကြီးများ၏ ၀ါဒလို့ ဖြစ်လာတယ်။ ဒီတော့ အဓိက (၂)ခုရဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုကို စပြောရအောင်။ Ven. Dr. W. Rahula ရဲ့ Theravada-Mahayana Buddhism စာအုပ်ကို ပြန်ုပြီး ကိုးကားပါမယ်။ မူရင်းကိုလဲ ရေးပေးပါမယ်။
ထေရ၀ါဒနဲ့ မဟာယာန ဘာကွာလဲ ။ (၁) နှစ်ဖက်လုံးက သကျမုနိ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကို ဆရာ အဖြစ်လက်ခံကြတယ်။ (၂) သစ္စာ လေးပါး တရားတော်ကို နှစ်ဖက်လုံးက အပြည့်အ၀လက်ခံကြတယ်။ (၃) မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းစဉ်ဟာလဲ နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ တရားပါပဲ။ (၄) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်ဟာလဲ နှစ်ဖက်လုံးမှာ အတူတူပါပဲ။ (၅) ဖန်ဆင်းရှင်ကို နှစ်ဖက်လုံးမှာ လက်မခံပါဘူး။ (၆) အနိစ္စ ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ နဲ့ သီလ၊သမာဓိ ၊ပညာတွေကို နှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံကြတဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ အဓိက တရားအနှစ်တွေမှာ မကွဲပြားဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။
အနတ္တ ကို နှစ်ဖက်လုံးလက်ခံပါတယ်။ မဟာယနက အတ္တ၀ါဒ မဟုတ်ပါဘူး။ အကိုလည်း မဟာယန ဆရာတော်တွေကို မေးကြည့်ဖူးပါတယ်။ အတ္တ၀ါဒ ကို သူတို့လည်း လက်မခံပါဘူး။ မူရင်း - (1) Both accept Sakyamuni Buddha as the teacher. (2) The Four Noble Truths are exactly the same in both schools. (3) The Eightfold Path is exactly the same in both schools. (4) The Paticca-samuppada or the Dependent Origination is the same in both schools. (5) Both rejected the idea ofasupreme being who created and governed this world. (6) Both accept Anicca,Dukkha, Anatta anf Sila, Samadhi , Panna . These are the most important teachings of the Buddha and they are all accepted by both schools without questions.
အဓိက ကွဲပြားချက်က တရားတော်တွေ ပေါ်မှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဗောဓိသတ္တ လို့ ခေါ်တဲ့ ဘုရားလောင်း ၊ ဘုရားကျင့်စဉ် ကျင့်သူအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သဘောထား ဖြစ်နေတယ်။ ထေရ၀ါဒ က ဘုရားလောင်း ကို ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးလို့ မကိုးကွယ်ဘူး။ ဒီတော့ တချို့က ဆိုပြန်တယ်။ ထေရ၀ါဒဆိုတာ ရဟန္တာ ဖြစ်ဖို့ ကျင့်တဲ့ ၀ါဒဖြစ်ပြီး ၊ မဟာယာနကတော့ ဗုဒ္ဓဖြစ်မယ့် ဘုရားလောင်း ဗောဓိသတ္တကျင့်စဉ်ကို လက်ခံတဲ့ ၀ါဒလို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ ထေရ၀ါဒမှာ ဗောဓိသတ္တဟာ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းကို သစ္စာတရားကို မသိသေးတဲ့ ပုထုဇဉ်မို့ မကိုးကွယ်သေးပေမယ့် ၊ မဟာယာန မှာတော့ ကိုးကွယ်စရာ ဗောဓိသတ္တတွေ များပါတယ်။ ဘုရားလောင်း ၊ ဘုရားရဲ့ မိခင်၊ ဖခင် ….အစုံပါပဲ ။
ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားတဲ့ ဓမ္မစကြာနှင့် ၀ိပဿနာ တရားတော်မှာလည်း ဒီအကြောင်းတွေပါ ပါတယ်။ မဟာယာန မှာ က အရဟတ္တဖိုလ်ရပြီးသာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီ အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလို့ မရသေးဘူး။ အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ အနာဂမ် ၊ သကဒါဂမ် ၊ သောတာပန် အထိ ပြန် လျှောကျသွားတယ်။ ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားရမယ် ။ ပြီးမှ ဘုရားဆုပန်ပြီး ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပြန်ကြိုးစားကြရမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆရာတော်ကြီးက ဘုရားဟောနဲ့ သူတို့ အယူအဆ လွဲနေကြောင်း (၂)ချက်တုတ်ပြတယ် ။ ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာ ပါတယ် ။ (၁) အကုပ္ပါမေ ၀ိမုတ္တိ (စေတောဝိမုတ္တိ -မူကွဲ ရှိတယ် ) = အရဟတ္တဖိုလ် ဥာဏ်တော်သည် မပျက်မစီးနိုင် ခံ့ခိုင်တည်တံ့လေပြီ ။
(၂) အယမန္တိမာ ဇာတိ ၊ နတ္ထိ ဒါနိ ပုန ဗ္ဘဝေါတိ = ဒီဘ၀သည် နောက်ဆုံးတည်း ၊ ဘ၀အသစ်ဖြစ်ရန် မရှိတော့ပြီ ။
လူငယ်ဆိုတာ ဖျက်လတ်တက်ကြွသော၊ ရဲရင့်သော၊ သန်စွမ်းသော၊ ခိုင်မာသော၊ သတ္တိရှိသော၊ နိုးကြား၍ဇွဲရှိသောသူကို လူငယ်ဟု ခေါ်ပါသည်။ သို့သော်ထိုလူငယ်၏ ဂုဏ်ပုဒ်များသည် ကောင်းမွန်သော၊ အကျိုးရှိသော နေရာများတွင်သာ အသုံးချသင့်ပါသည်။ အမျိုးဘာသာကို ထိခိုက်စေနိုင်သော၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်သော အမှုကိစ္စများတွင် အသုံး ချမည်ဆိုပါက မသင့်တော်နိုင်ပေ။ အမျိုးကိုဆက်မည့်၊ ထိန်းသိမ်းမည့် သစ်လွင်ရဲရင့်သော မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များသာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တမျိုးသားလုံး၏ ကောင်းမွန်သော ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ဓလေ့စရိုက်များ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာများ ကိုအမွေဆက်ခံမည့် “မွေခံထိုက်စေ လူငယ်များ” ဖြစ်ဖို့ရန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူငယ်များ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကောင်းသည့်အမွေများအား ဆက်ခံသင့်သလို မကောင်းသည့်အကျင်၊့ စရိုက်ဆိုး များကိုလည်း ပယ်ရှားပစ်ရမည့် တာဝန်မှာ အမျိုးကပေးသော အမျိုးသားရေးတာဝန်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။
လူငယ်တို့၏ စိတ်သဏ္ဍာန်မှာ စူးစမ်းလိုသောစိတ် အမြဲကိန်းအောင်းနေတတ်ကြပါသည်။ စူးစမ်းသည်ဆိုရာဝယ် ကောင်းသည့်အရာများ ရှိသလို မကောင်းသောအရာ၌လည်း စူးစမ်းတတ်ကြပေသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ လူငယ်အများစုသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓ သာသနာတော်၏ အခြေခံအနှစ်သာရများကို စူးစမ်းလေ့လာရာတွင် အားနည်းနေတတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က မိဘ ဆရာသမားများ၏ သွန်သင်ဆုံးမမှုမှတစ်ပါး တဆင့်တက်၍ လေ့လာကြိုးစားမှုမှာ အားနည်းနေကြပေသေးသည်။ တတ်သိနားလည်သော အနာဂတ်အတွက် လူငယ်များလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် ပမာဏအားမှာ နည်းနေသေးသည်ဟု တွက်ဆနိုင်ပါသည်။ အနာဂတ်အတွက် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်းတည့်တံ့ပြန့်ပွားရန်မှာ လူငယ်တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပြီး သာသနာဝင်တိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ရန် အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းငယ်မှစ၍ နိုင်ငံတ၀န်း တိုးတက်ရေး၏ အဓိက အခြေခံအုတ်မြစ်မှာ သီလတရားပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တို့သည် သောက်စားမူးရစ်ခြင်း ကာမဂုဏ်ပျော်ပါးခြင်းအမှုတို့ကို လူငယ်ဘ၀၏ အနှစ်သာရများဟု မှတ်ယူခြင်း သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တရားတော်များနှင့် လုံးလုံးလျားလျား ဆန့်ကျင်လျက်ရှိနေသည်။ ထေရ၀ါဒ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများအတိုင်း ကျင့်ကြံမနေထိုင်ခြင်းသည် ဆိုးဝါးသောမြင်ကွင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းခလေးများမှာလည်း ဗေဒင်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုတို့၌ ၀ါသနာထုံလျက် တစ်ချို့မှာ မူးရစ်စေသော အရာများကိုပင် သောက်စားပျော်ပါးခြင်းမှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဘာသာခြားများနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဖြင့်ဖြစ်စေ ချစ်ကျွမ်းဝင်ရာမှဖြစ်စေ မိမိပါ ဘာသာခြားဖြစ်ရခြင်းမှာ ရင်နာစရာအကောင်းဆုံးသော ဖြစ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်။ မနာလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရခဲလှသော လူ့ဘ၀တွင်မှ ရခဲလှသော သာသနာတော်တွင် ကြုံကြိုက်ပါလျက် ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းကို နှမျောမိခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ရှေးသူတော်ကောင်းတို့ ဆိုထားခဲ့သော ငါးပါးသီလ ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲစေချင်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်အများစုမှာ ကွင်းလုံးချွတ်လိုက်ကြသည်ဟုဆိုလျှင် လွန်ဖွယ်ရာမရှိပေ။ လူငယ်တိုင်းတွင် အစွမ်းအဆများ ရှိကြစမြဲဖြစ်ပါသည်။ အသုံးမချတတ်၍ အသုံးမကျခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးရှိအောင် ဘယ်လိုနေမလဲ သေချာပြန်စဉ်းစာကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဝေးကြီးမဟုတ်ပါ။ သီလတရားကိုသာ ကြိုးစားပြီး ဆောက်တည်ကြည့်လိုက်ပါ။ သီလတရား၊ တစ်နည်း ကိုယ့်ကျင့်တရား၊ သိက္ခာတရားကို တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ထိန်း ကြည့်ပါ။ မိမိကိုယ်ကိုယ်မိမိ တန်ဖိုးထားတတ်လာမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ။ သူတစ်ပါးကို ကြည့်ညိုတာထက် ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည်ညိုတတ်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးပါသည်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်မကြည်ညိုတတ်လျှင် အပါယ်ပါကျရောက် နိုင်ပါသည်။ မိဘသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆန်းသည်မဟုတ်သော်လည်း ပြန်လည်သုံးသပ်လျှင် ထူးသည့်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် လူတစ်သိန်းကွယ်လွန်၍ လူပြည်သို့ တစ်ယောက် ပြန်ရောက်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှပါသည်။ လေးဘုံပယ်ရွာမှ အကုသိုလ်အကြွေးများကို များစွာဆပ်လျက် တစ်ဖန်လူ့ဘ၀သို့ ပြန်ရရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူ့ဘ၀ရသော်ငြားသော်လည်း သာသနာတော်နှင့်ကြုံကြိုက်ရန်မှာ သာ၍ခက်ခဲသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ဤသို့ အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်လာရခြင်းမှာ အကြောင်းတရားတော့ ရှိရစမမြဲပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျက် သီလပျက်ယွင်းမှုများ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို အခြေခံကျကျ နားမလည်၍ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ဦးဆရာဆိုသည့်အတိုင်း မိဘများသည် အခြေခံကျကျ နားမလည်၍ ဖြစ်နိုင်သလို အပေါင်းအသင်းမှားယွင်းမှုများ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူငယ်ဖြစ်သော်ငြားလည်း လူငယ်ဂုဏ်ပုဒ်နှင့်လည်းမညီ ကိုးကွယ်မှုမှာလည်း ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ပါလျက် အခြေခံသီလတရားကိုသော်ဖြင့် နားမလည်၊ နားလည်သော်လည်း မလိုက်နာလျှင် အနာဂတ်၏ အသီးအပွင့်မဖြစ်ခင် ပိုးစား၍ ကြွေကျခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ တိုးတက်မှုဟူသမျှသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၌သာ အခြေခံ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကျရှုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထေရ၀ါဒ ကိုးကွယ်မှုဖြစ်လျက် ဘုရားရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၊ လူဖြစ်လာရသည့် အကြောင်းကဘာလဲ၊ ထေရ၀ါဒဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်တာလဲ၊ သရဏဂုံဘာကြောင့် ဆောက်တည်ရသလဲ၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဆိုတာဘာလဲ၊ ဆွမ်းကပ်၊ ပန်းကပ်မှအစ အခြေခံကျကျကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မေး၍ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်စေချင်သည်။ တတ်သိနားလည်ထား လျှင်လည်း နားလည်သည့်အတိုင်းကျင့်လျှင် သာသနာတော်ပြန့်ပွားသလို တိုင်းပြည်အေးချမ်းမည်မှာ မလွဲဧကန်ပါ။ ထေရ၀ါဒကို လေ့လာလျှင် ခိုင်မြဲသောဝါဒ၊ ရှင်မဟာကဿပ အရှင်မြတ်တို့အစရှိသော ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့၏ အယူအဆ(ဓမ္မ)၊ တစ်နည်း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ်နှင့် ခိုင်မြဲသော ၀ါဒကို ထေရ၀ါဒဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သရဏဂုံဆောက်တည်ရာမှာလည်း ဗုဒ္ဓံ မြတ်စွာဘုရားကို သရဏံ ကိုးကွယ်ရာဟူ၍၊ ကိလေသာဘေး၊ အပါယ်ဘေး၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘေး၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဘေးတို့မှ လွတ်ကင်းတတ်သည်ဖြစ်၍ ဂစ္ဆာမိ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် သိမှတ်ပါ၏ဆိုတာကို သိနေသင့်ပါသည်။ လူငယ်ဆိုသည့်အတိုင်း ဤသို့ အရာရာကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနေရမည်။ ဒါမှလည်း ဘုရားရှင် အဆုံးအမနှင့်ကိုက်ညီပေမည်။ မိဘများ အိမ်မှာ ရိုးရာဆိုပြီး နတ်တွေကိုးကွယ်နေကြသည်။ ဒါတကယ်လား၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်လား၊ သမိုင်းကြောင်းလား လူငယ်များကိုယ်တိုင် စုံစမ်းကြည့်သင့်ပါသည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စမ်းစစ်ကြည့်သင့်ပါသည်။ ရိုးရာနတ်များကို ကိုးကွယ်၍ ကိလေသာဘေး၊ အပါယ်ဘေး၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘေး၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဘေးတို့မှ လွတ်ကင်းနိုင်သလား၊ သမိုင်းအထောက်ထား ခိုင်လုံမှုရှိသလား၊ လူတွေ အကြောက်တရား ကြောင့် ကိုးကွယ်နေကြတာလား၊ လာဘ်လိုချင်လို့ကိုးကွယ်နေကြတာလား၊ ဘုရားရှင် အဆုံးအမနှင့် ကိုက်ညီသလား စသဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်လျှင် အဖြေမှာ ရိုးရှင်းစွာ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ ဗေဒင်ဆိုသောအရာသည်လည်း တကယ် အားကိုးရာအစစ်ဟုတ်သလား၊ ယတြာချေတော့ရော ကိုယ်ဖြစ်ချင်လို ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား စသဖြင့် လူငယ်ပီပီ တက်တက်ကြွကြွ ဟုတ်၏ မဟုတ်၏ စုံစမ်းကြည့်စေချင်ပါသည်။ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ၊ သိချင်သောအရာများစွာ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ မေးခွန်းများပေါ်လာလျှင် တတ်သိနားလည်နိုင်သော ဆရာသမားများကို မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးစေချင်ပါသည်။ မရှက်ကြောက်သင့်ပါ။ စကားပြောဆိုရာတွင် ပြေရဲမေးရဲ ဖြစ်နေသင့်ပါသည်။ ရင်ထဲမှာ သံသယတွေ ရှင်းလင်းလာပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်ရှင်းသွားရင် ကိုယ်ရှင်းသလို ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို ပြောပြတိုင်ပင်ကြည့်လိုက်လျှင် အတွေးအသစ်များပင် ထပ်မံရရှိလာနိုင်ပါသည်။ အတွေးခေါ်သစ်များနှင့် တရားဆောင်းပါး၊ တရားစာပေ၊ တရားတော်များ နာကြားပြီး ပြန်လည်တိုက်ဆိုင် လေ့လာကြည့်ပါက ပို၍ရှင်းလင်းပါလိမ့်မည်။ ရင်တွင်းမှာ အမှားများစွာဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပပျောက်သွားလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံကျကျ နားလည်ပြီဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်လာလျှင် သီလတရားလုံခြုံစေလျက် ဒါနအမှုတို့ကို လူငယ်များပီပီ ဆက်လက်ဝေဖန် လေ့လာနေရမည်။ ဒါနဆိုရာတွင်လည်း ပါရမီထိုက်သော ဒါနဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြုမလဲစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ၁။ နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်ထားရမယ်။ ၂။ သူတစ်ပါးအကျိုးကို ငဲ့ရမယ်။ ၃။ မိမိအကျိုးကို မငဲ့ရဘူး ဆိုတဲ့ ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ ကိုက်မှသာ ပါရမီထိုက်သော ဒါနဖြစ်မှာပါ။ ထင်ရှားကျော်ကြားလိုသော စိတ်ဖြင့် ပြုသောဒါန၊ လောကီကောင်းကျိုးများကို လိုလားတဲ့စိတ်နှင့် ပြုသောဒါနဆိုရင်တော့ ပါရမီထိုက်သော ဒါနမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ မဖြစ်နိုင်လျှင် အကျိုးပေးသည်လည်း ကုသိုလ်ရသည် မှန်သော်လည်း စင်ကြယ်သောဒါန မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်လျှင်လည်း ဒါနပြုသည်ဆိုသည်မှာလည်း မိမိမှာ ဘ၀များစွာက ထုံလာခဲ့သော လောဘကိလေသာကို လျော့အောင် ပါးအောင် စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းလိုက်တာပါ။ ၀ိပဿနာဉာဏ်မြင်နိုင်ရင် မြင်နိုင်သလောက် ဒါနမှသည် နိဗ္ဗာန်ဆီကို တဖြည်းဖြည်း လျှောက်လှမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကံကံ၏အကျိုး၊ အကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်မှု စသဖြင့် အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းလေ့လာလျှင် လူဖြစ်လာရ လူ့ဘ၀ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုမှသာလျှင် ကိုးကွယ်မှု အစစ်မှန်နှင့် လူငယ်အင်္ဂါထပ်တူညီမျှပါမည်။ လူငယ်တို့သည် ပင်ကိုယ်အစွမ်းသတ္တိပြည့်ဝကြပြီး ဖြူစင်မှုကို အခြေခံကြပါသည်။ မိဘများ နားမလည်၍သော် လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သော်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီပွားရေး အခက်အခဲများကြောင့် လည်းကောင်း ကိုးကွယ်မှု မမှားစေလိုခြင်းသည် ရင်တွင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ မှားလျှင်လည်း ချက်ခြင်းပြင်ဆင်လိုက်လျှင် ဘ၀အောင်မြင်မှု၏ အစဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ တရားတော်များကို အခြေခံကျကျ သိစေချင်ပါသည်။ အခြေခံကျကျသိခဲ့လျှင် မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ကိုးကွယ်မှု မှားယွင်းမှု မရှိနိုင်ချေ။ သို့သော် အသိကို ကျင့်မှ မှားယွင်းမှု မရှိနိုင်မည်မှာ သေချာလှပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် အနာဂတ်၏ လူငယ်ကောင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တစ်ချိန်တွင် ကိုယ့်အလှည့်၊ ကိုယ့်တာဝန်၊ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်သို့ နိုင်ငံတော်၏တာဝန်၊ သာသနာတော်၏တာဝန် ကျရောက်လာမည်မှာ ဧကန်ပင်ဖြစ်သလို၊ ကိုယ်တိုင်မိဘနေရာလည်း ရောက်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နေ့သည် မိမိ၏ နောင်တရသောနေ့ မဖြစ်ရန်မှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်များမှာ လောကီ၊ လောကုတ်နှစ်လီသော အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပေသည်။ လူဘ၀ရလာခိုက်တွင်မှ ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်များဖြင့် လောကီ၊ လောကုတ်၌ အကျိုးရှိအောင် အသုံးမချတတ်လျှင်ဖြင့် အမိုက်တကာ့ဗိုလ်မင်း၊ အဖျင်းတကာ့ဗိုလ်ချုပ်မှာ မိမိသာဖြစ်ပါ တော့မည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသည် ကိုးကွယ်မှု အစစ်မှန်ရရှိထားပါလျက် လက်ဝယ်တွင် ပတ္တမြားရှိသူသည် ပတ္တမြား၏ တန်ဖိုးနားမလည်ကဲ့သို့ မဖြစ်ရန် အရေးကြီးလှပါသည်။ လူငယ်၏တာဝန်ကို ကျေပွန်လျက် ကိုးကွယ်မှုအစစ်အမှန်ကို တတ်သိနားလည်ကာ နိုင်ငံတော်အကျိုး၊ သာသနာအတော်အကျိုး သယ်ပိုးနိုင်သော သားကောင်းရတနာ သမီးကောင်း ရတနာများဖြစ်ကြပါစေ။
ငရဲ(ချမ်းသာကင်းသော)ဘုံသည် ရှစ်ဘုံရှိ၏။ သိဉ္ဇိုဝ်း၊ ကာလသုတ်၊ သံဃာသ၊ရောရုဝ၊ မဟာရောရုဝ၊ တာပန၊ မဟာတာပန၊ အ၀ီစိငရဲတို့ဖြစ်သည်။ ယင်းရှစ်ဘုံကို ပေါင်း၍၊ “ငရဲဘုံ” ဟု ဘုံတစ်ဘုံအဖြစ် သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အချို့ပါဠိတော်များ၌ “ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊ပြိတ္တာ” ဟု အပါယ်သုံးဘုံသာ ဖော်ပြ၏ အသုရကာယ်ကို တာဝတိံသာ နတ်တို့တွင် ရောသွင်း၍ သို့မဟုတ် ပြိတ္တာ အတွင်းမှာ ရောသွင်း၍ ထိုသို့ သုံးဘုံးသာ ဟောပြဟန်တူသည်။ အများအားဖြင့် အပါယ်လေးဘုံဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဤကမ္ဘာမြေပြင်မှ အောက် ယူဇနာ တစ်သောင်းငါးထောင် ကွာဝေးသော အရပ်၌ သိဉ္ဇိုဝ်းငရဲတည်ရှီ၏။ ယင်း၏အောက် အဆင့်ဆင့်၌ ယူဇနာတစ်သောင်းငါးထောင်စီ ခြားကွာ၍ ကာလသုတ် စသော ကြွင်းငရဲဘုံ အဆင့်ဆင့် တည်ရှိကြသည်။ ငရဲဘုံတွင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေသော သံမြေများ၊ ကျိုက်ကျိုက်ဆူပွက်နေသော ရေများ ရှိသည်ဟု ကျမ်းဂန်တို့၌ ပြဆိုသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်တို့က ကမ္ဘာမြေ၏ ထုထည်သည် မိုင်သန်းပေါင်း နှစ်သိန်းခြောက်သောင်းရှိသည်၊ မြေပြင်မှ ၆၆-မိုင်ခန့် ထူသော ကျောက်လွှာကြီး နှစ်ထပ်အတွင်း၌ အရေပျော်နေသော သံနစ်ကဲလ်နှင့် ကိုဘောလ်သတ္ထုများကို ထိန်းချုပ်ထားသည်၊ ကမ္ဘာ၏ ဗဟိုချက်သည် အရည်လော၊ အစိုင်ခဲလော-ဟူ၍ ယနေ့ထိ မည်သူမျှ မပြောနိုင်သေးချေ စသည်ဖြင့် ပြောဆိုကျသည်။ အဆိုနှစ်ရပ်လုံးသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ပါ၏။
အပါယ်ဘုံသားတို့၌ သက်တမ်း သတ်မှတ်ချက်မရှိ၊ ပြုလုပ်ခဲ့သော အကုသိုလ် အနည်အများလိုက် ခံနေကြရလေသည်။
တိရစ္ဆာန်ကား ဘုံသီးခြားမရှိ၊ လူတို့ဘုံမှာပင် နေကြလေသည်။ တိရစ္ဆာန်နေထိုင်ရာ အစုအဝေးကိုပင် တိရစ္ဆာန်ဘုံဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြိတ္တာတို့ကား တောင်ကြီးတောကြီး စသည်တို့၌ နေထိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့ကို လူများ မမြင်နိုင်ကြချေ။ ယင်းတို့က ကိုယ်ထင်ပြမှသာ မြင်ကြရသည် ယင်းတို့သည် လူတို့လောက် ဘုန်းကံမကြီး၍ ခြောက်လှန့်လည်း ကြောက်လန့်စရာမလိုပေ။
ဤလူ့ဘုံ၏အထက် ယူဇနာလေးသောင်းနှစ်ထောင် ကွာဝေးသောအရပ် (ယုဂန္ဓိုရ်တောင်ထိပ်) ၌ စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံရှိ၏။ နတ်ခြောက်ဘုံအနက် အောက်ဆုံးဘုံဖြစ်သည်။ စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံအထက် ယူဇနာလေးသောင်း နှစ်ထောင် ဝေးသေသာအရပ် (မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်)၌ တာဝတိံသာနတ်ဘုံ၊ ယင်းအထက် ယာမာ၊ ယင်းအထက် တုသိတာ၊ ယင်းအထက် နိမ္မာရတိ၊ ယင်းအထက် ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီနတ် ဘုံတို့သည် ယူဇနာ လေးသောင်းနှစ်ထောင်စီ ခြားကွာလျက် အဆင့်ဆင့်တည်ရှိကြသည်။
ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တိနတ်ဘုံ၏ အထက် ယူဇနာ ငါးသန်းငါးသိန်းရှစ်ထောင် ဝေးသောအရပ်၌ အောက်ဆုံး ဗြဟ္မာဘုံ သုံးဘုံသည် ဘေးတိုက်တန်းစီ တည်ရှိ၏။ ဗြဟ္မပါရိသဇ္ဇာ၊ ဗြဟ္မပုရောဟိတာ၊ မဟာဗြဟ္မာဘုံတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကို ပထမဈာန်သုံးဘုံဟု ခေါ်ကြသည်။
ပထမဈာန် သုံးဘုံအထက် ယူဇနာ ငါးသန်း ငါးသိန်း ရှစ်ထောင် ဝေးသောအရပ်၌ ပရိတ္တာဘာ၊ အပ္ပမာဏာဘာ၊ အာဘဿရာ ဟူသော ဒုတိယဈာန်သုံးဘုံ တပြေးညီ ဘေးတိုက်တည်ရှိကြသည်။
ယင်းအထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း အကွာအဝေး တူညီသော အရပ်၌ ပရိတ္တသုဘာ၊အပ္ပမာဏသုဘာ၊ သုဘကိဏှာမျည်သော တတိယဈာန်ဘုံတို့ တပြေးညီ ဘေးတိုက်တည်ရှိကြသည်။
ယင်းအထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း အကွာအဝေး တူညီသောအရပ်၌ ဝေဟပ္ဖိုလ်ဘုံ၊ အသညသတ်ဘုံနှင့် သုဒ္ဓါဝါသ ငါးဘုံတို့ တပြေးညီ တည်ရှိကြသည်။ ယင်း ခုနှစ်ဘုံကို စတုတ္ထဈာန်ဘုံဟု ခေါ်၏။ ထိုတွင် အသညသက်ဘုံရှိ ဗြဟ္မာများကား ရုပ်သာရှိ၍ သိစိတ် သိနာမ် မရှိပေ။
စတုတ္ထဈာန်ခုနှစ်ဘုံ၏အထက် ယူဇနာ ငါးသန်းငါးသိန်းရှစ်ထောင် ဝေးကွာသောအရပ်မှစ၍ အာကာသာနဉ္စာယတနဘုံ၊ ၀ိညာဏဉ္စာယတနဘုံ နှင့် နေ၀သညာနာသညာယတနဘုံတို့သည် ယူဇနာ ငါးသန်း ငါးသိန်း ရှစ်ထောင် စီအထက်အောက် ခြားကွာလျက် အဆင့်ဆင့် တည်ရှိကြသည်။ ယင်းလေးဘုံကို အရူပ(ရုပ်မရှိ၊နာမ်သာရှိ) ဗြဟ္မာဘုံဟု ခေါ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ ရုပ်သက်သက်တစ်ဘုံ၊ နာမ်သက်သက် လေးဘုံမှ တပါး ကျန်ဗြဟ္မာဘုံ(၁၅)ဘုံသည် ရုပ်နာမ်အစုံရှိ ဗြဟ္မာဘုံများဖြစ်ကြသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့် အထက်ဆုံး ဗြဟ္မာဘုံ နှင့် လူ့ဘုံသည် ယူဇနာပေါင်း “၂၂,၂၄၈,၀၀၀ “(နှစ်ကုဋေ,နှစ်သန်း,နှစ်သ်ိန်း,ရှစ်သောင်း,လေးထောင်) ကွာဝေးသည်။
တစ်ယူဇနာ ၁၂ မိုင်၊ ၅ ဖာလုံ ၊ ၈ သံကြိုး နှင့် ၄ ယာဒ်ရှိ၏ ။
အသင်င်္ချေယျကပ် ၄ ခု အပေါင်းသည် မဟာကပ်ဖြစ်သည် ။
(ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတယောက် စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြသည်)